teoria fampidirana brazing induction | mpanamboatra milina fanamafisana induction | vahaolana fanafanana fampidirana
Ny famotehana sy ny fandoroana dia ny dingan'ny fidirana amin'ny fitaovana mitovy na tsy mitovy amin'ny fampiasana fitaovam-pako iray feno. Ny metaly fanafody dia misy ny lead, ny kodiarana, ny varahina, ny volafotsy, ny nikela ary ny tady. Ny alika ihany no mameno sy manatanjaka mandritra ireo dingana ireo mba hiditra amin'ny fitaovana fototra ho an'ny fitaovana. Ny metaly mpanangom-bokatra dia entina miaraka amin'ny kapilara. Ny fanodinana solika dia atao ambany 840 ° F (450 ° C) ary ny fampidinana ny fampiharana dia atao amin'ny hafanana mihoatra ny 840 ° F (450 ° C) hatramin'ny 2100 ° F (1150 ° C).
Ny fahombiazan'ireny dingana ireny dia miankina amin'ny teti-pivoaran'ny fivoriambe, ny fisavana eo amin'ny tontolon'ny fiaraha-miasa, ny fahadiovana, ny fifehezana ary ny fifantenana ny fitaovana ilaina mba hanatanterahana ny dingana azo averina.
Ny fahadiovana dia azo alaina amin'ny alalan'ny fampidirana flux izay mandrakotra sy mamongotra vovoka na oksida mampivily azy ireo amin'ny fiaraha-miantoka.
Fandidiana maro izao no atao anaty rivo-piainana voafehy miaraka amina bodofotsy misy gazy tsy mitongilana na fitambaran-tsiranoka tsy mihetsika / miasa mba hiarovana ny fandidiana sy hanafoanana ny filàna flux. Ireo fomba ireo dia voaporofo tamin'ny karazan-dahatsoratra maro samihafa sy fanamboarana ampahany manolo na mankasitraka ny haitao fandrindrana ny rivotra iainana miaraka amina fotoana ara-potoana - fizotran'ny fikorianan'ny singa tokana.
Ny fitaovam-pandrefesana dia mety ho tonga amin'ny endriny isan-karazany, ny endriny, ny haben'izy ireo ary ny filaharany, arakaraka ny fampiasana azy ireo. Ny ribon-tsoavaly, ny volo-vorona, ny pasteur, ny filaminana sy ny preformed ny volo dia vitsivitsy amin'ireo endrika sy endrika vita amin'ny fomba fanao.
Ny fanapahan-kevitra amin'ny fampiasana fitambarana sy / na endrika manokana dia miankina amin'ny fitaovan'ny ray aman-dreny hiditra, ny fametrahana mandritra ny fanitsiana sy ny tontolo iainana arak'izay itondrana ny vokatra farany.
Ny fiovàna dia misy fiantraikany amin'ny hery
Ny fivoahana eo anelanelan'ny faying miara mifamatotra dia mamaritra ny habetsaky ny varotra, ny kapilary fihetsika / penetration ny legioma ary avy eo ny tanjaka ny fiaraha-miasa vita. Ny fitondran-tena tsara indrindra ho an'ny fampiharana volom-bozaka mahazatra dia ny 0.002 santimetatra (0.050 mm) mankany amin'ny 0.005 mm (0.127 mm) fialan-tsasatra tanteraka. Aluminium dia matetika 0.004 santimetatra (0.102 mm) mankany 0.006 santimetatra (0.153 mm). Mihoatra lavitra noho ny 0.015 santimetatra (0.380 mm) matetika dia tsy ampy ny fepetra kapilary ho an'ny vakana mahomby.
Ny fiarovan-tena amin'ny varahina (ambonin'ny 1650 ° F / 900 ° C) dia mitaky ny fandeferana iombonana amin'ny toetr'andro ambany indrindra ary amin'ny toe-java-miseho sasany amin'ny toetr'andro amin'ny mari-pahaizana manokana mba hahazoana antoka ny fivoahana miara-miasa amin'ny ankapobeny mandritra ny hafanana.
Ny rafitra fanamoriana dia manome fomba mahomby sy mendrika hanamafisana haingana ny faritra voafidy amin'ny fivoriambe. Ny fandinihana dia tsy maintsy omena ny fisafidianana ny famatsian-koditra ho an'ny mandeha amin'ny herinaratra, ny haavon'ny herinaratra (kilowatt ampiasain'ny kilaometatra santimetatra), ny fotoana fampangatsiahana, ary ny famolavolan-doko induction mba hanomezana ny hafanana ilaina ao anaty fiara manokana.
Ny fanasitranana fanasitranana dia ny fanasitranana tsy mifandray amin'ny alalan'ny fampitaovana ny teolojia. Ny famatsiana herinaratra dia loharanon-dian-dian-drivotra ho an'ny indrafo amin'ny induction, izay lasa rivotra voalohany amin'ny mpanofana, raha toa ny ampahany amin'ny hafanana dia ny faharoa ho an'ny transformer. Ny singam-piasa miasa amin'ny fitaovan'ny fitaovam-pirafitry ny fitaovam-pirafitry ny fitaovam-pitaovan'ny rafitra ao amin'ny fivoriana.
Ny fandehanana amin'izao fotoana izao amin'ny mpamily elektrônika (ny fitaovana) dia miteraka fanasan-damba rehefa mihaona ny fanoherana azy. Ireo fatiantoka ireo dia ambany noho ny ala mandalo amin'ny alimo, varahina ary ny filahan'izy ireo. Ireo fitaovana tsy misy fangarony dia mitaky herinaratra fanampiny ho hafanana noho ny fifangaroan-doko.
Ny dingana manodinkodina dia mandona ny rivotra. Ny fifandraisana misy eo amin'ny hafan'antony sy ny halaliny miditra amin'ilay ampahany dia fantatra amin'ny hoe ny halalin'ny famafana. Ny halavan'ny ampahany, ny karazan-damba sy ny hatevin'ny rindrina dia mety hisy fiantraikany amin'ny famenoana ny fahamailana eo amin'ny halavany.
Sokajy Technologies Tags induction brazing, induction bridging principle, indoneziana, induction soldering, fampidiran-dra, Fampidiran-drazana fandinganana
Induction Brazing & Princio
Fitsipika Brazing & Soldering Induction Brazing sy soldering dia fizotry ny fampidirana fitaovana mitovy na tsy mitovy amin'ny fampiasana fitaovana famenoana mifanentana. Ny metaly famenony dia misy firaka, firapotsy, varahina, volafotsy, nikela ary ny firaka aminy. Ny firaka ihany no mitsonika sy manamafy mandritra ireo fizotrany ireo mba hiditra amin'ireo akora fototra. Nosintomina ho any… Hamaky bebe kokoa
Sokajy FAQ Tags fanasitranana fanasitranana, induction brazing principls, indoneziana, fampidiran-drazana ravina